Home News Muxuuyahay Cashirka laga baran karo Weerarkii Xalay ay AL Shabaab ku qaadeen...
Muxuuyahay Cashirka laga baran karo Weerarkii Xalay ay AL Shabaab ku qaadeen Hoteel SYL?
Al Shaaab ayaa Xalay waqti hore waxa ay Weerar culus kuqaadeen Hoteelka SYL oo kuyaala afaafka hore ee Villa Soomaalia oo ah halka Dalka Soomaalia looga arimiyo waxaana goobtaa ay tahay mid amaankeeda aad loo sugo waxaan Xayndaabka Madaxtooyada Kusugan Ciidamo faraban oo ilaalaalo u ah Madxtootada.
Iyada oo ay sidaa tahay ayaa waxaa Xalay Weerar Culus Hoteelka SYL kuqaaday Xubno katirsan Al Shabaab oo labisan Dariisaka Ciidamada Booliska Soomaalia waxa ayna wateen Hubka Fudud Waxaana ay sixooga ah kugaleen Gududaha Hoteelka.
Marka ay galeen Horeelka ayaa waxa ay bilaabeen toogasho toos ah iyo Bambaanooyin oo ay u adeeegsanayaan Dadkii Hoteelka ku sugnaa saacao kadib ayaa waxaa suurta gashay in lasoo afjaro Dagaalkii xalay ay Al Shabaab ku qaadaeen Hoteelka sida weyn loo ilaaliyo Ee SYL.
Waa xeelada cusub oo ay Al Shabaab Xalay lasoo shirtageen mana looga baran in ay Al Shabaab Ciidamo lug ah ku weeraraan goob ay doonayaan in ay galaan waxaana inta aysan gelin goobtaa u adeegsan jireen Gawaari Qaraxyo lagu soo raray Balse tani waxa ay tahay Xeelad cusub oo ay Al Shabaab layimaadeen.
Weerarkii Xalay ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili mudooyinkii dambe Xaalada Magaalada Muqdisho ay eheed mid degan waxaana Hay”adaha Amaanku ay sheegeen in ay kuguulaysteen sugida Amniga Caasimada.